ဆက်လက် စောင့်ဆိုင်းကြရဦးမယ့် ထိုင်းရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းရှိ လမ်းတစ်လမ်းပေါ်တွင် ဖြတ်လျှောက်နေကြသော မိန်းကလေးနှစ်ဦး။ ဓာတ်ပုံ - Vincenzo Floramo
သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူရှိသလဲ
အမှောင်ထဲက မြို့တော် မိုင်းလား
တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်က မိုင်းလားမြို့ဟာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများနဲ့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ဈေးကွက်တို့ကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ် အိုလီဗာဆလိုး ရေးသားသည်။ အထူးဒေသ အမှတ်- ၄ ဝင်ပေါက်နဲ့ မိုင်အနည်းငယ်အကွာမှာရှိနေတဲ့ မျှော်မဆုံးတဲ့ စပါးစိုက်ခင်းတွေက ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးတွေဆီ ရောက်ဖို့ လမ်းစတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမတစ်လျှောက်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေရှိသလို.
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရာသို့ ဝင်ရောက် ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းခဲ့သည့် လေယာဉ်သုံးစီးအား အမျိုးအစား စိစစ်နေ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေတွင် မြန်နှုန်းမြင့်လေယာဉ်သုံးစင်း ကိုးမိနစ်ကြာ ဝင်ရောက်ဖြတ်ကျော် ပျံသန်း
Emirates လေကြောင်းလိုင်းက ဒူဘိုင်း- ရန်ကုန်ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲတော့မည်
Emirate လေကြောင်းလိုင်းမှ Boeing 777-300ER လေယာဉ်တစ်စိး။ ရန်ကုန် အာရပ်စော်ပွားများ ပြည်ထောင်စု၊ ဒူဘိုင်းနှင့် ရန်ကုန်ကြား ခရီးစဉ်များကို Emirates လေကြောင်းလိုင်းက သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြေးဆွဲတော့မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကို Boeing 777-300ER လေယာဉ်များ အသုံးပြုကာ နေ့စဉ် ပြေးဆွဲသွားမည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီ.
အောင်မြင်ဖို့ အချိန်ယူရဦးမယ့် ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား စနစ်သစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ပြေးဆွဲပြီဖြစ်သည့် BRT ယာဉ်လိုင်းများသည် ပြည်သူများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို တဖြေးဖြေး ရရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း ရေရှည် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရန် အချိန်ယူရဦးမည် ဖြစ်သည် သီရိဟန် ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ – တေဇလှိုင် ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းမကြီးသည် ပုံမှန်မောင်းနှင်နေကြသော မော်တော်ကားများဖြင့် ပြည့်ကျပ်လျက် ရှိသည်။ အင်းလျားကန်ဘက်မှ တိုက်ခတ်လာသော လေကလည်း.
အရေးကြီးအဆိုများကို လာရောက်ဖြေကြားမည်မဟုတ်ဟု အစိုးရက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထံ စာပို့
အစိုးရသစ်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နေရသည့်အပြင် အရေးကြီးအဆိုပါ ကိစ္စရပ်များအား ထဲထဲဝင်ဝင် မလေ့လာရသေးသဖြင့် လာရောက် မဖြေကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြထား